Nhau - White Cross-yakabatana Polyethylene Foam Gaskets
White Muchinjikwa-yakabatana Polyethylene Furo Gaskets
Yakavharwa sero muchinjikwa yakabatana polyethylene furo inogona kugara iri imwe yeakanakisa furo gasket zvinhu. Iyo polyethylene furo ine maviri akakosha zvikamu - kemikari kuyambuka-yakabatana polyethylene furo uye irradiation kuyambuka-yakabatana polyethylene furo. Iyo yekupedzisira iri nani uye inowanzo shandiswa se furo gasket kumisika inosanganisira zvekurapa, zvigadzirwa zvemagetsi, zvipfeko zvekushongedza, zvinoriumba zvemotokari, nezvimwe.
Iradiation muchinjikwa-yakabatana polyethylene furo gasket ine kuita kwakanaka pazvinhu zvemuviri. Yakavharwa sero rakapatsanurwa polyethylene furo zvinhu
Smooth nyaradzo yepamusoro pamwe nharaunda inoshamwaridzana kupedzisa
Premium kushorwa kune hunyoro, mamiriro ekunze uye mafuta
Yakanaka kupisa uye acoustic kuputira
Inowanikwa mune dzakasiyana siyana densities uye mavara
Yakavharwa maseru mamiriro ekuderera kwemvura uye kutapudza kwemhepo.
Iradiation muchinjikwa-yakabatana polyethylene furo gasket zvinhu zvine kumwe kuchinjika. Ukobvu huwandu hunowanikwa kubva pa0.08 mm kusvika pa8 mm. Humwe hukobvu hunogona kuve tsika hwakagadzirwa nefuro lamination maitiro. Zvakare kuwanda kunogona kubva pa28 kg / m³ kusvika ku300 kg / m³. Yakapusa furo mavara chena uye nhema. Mamwe mavara anogona kuve akagadzirwa kusanganisira bhuruu, girini, tsvuku, orenji uye zvichingodaro.
Yevatengi Kesi - Furo Chigadzirwa Kunyorera
chena tsika furo gasket zvinhu Heino iradiyadhi kuyambuka-yakabatana polyethylene furo gaskets isu takagadzira kumusika wedu wepamba
mutengi. Ivo vanozoshandisa iyi PE furo gasket zvinhu semubatanidzwa wekubatanidza kune avo emota zvikamu. Yedu pamuchinjiko-yakabatana polyethylene foam gasket inoshanda sechikamu chekutsikirira zvakare chemafuta uye kupisa kwemafuta. Nekuda kwekugona kwavo kwakakura, vanoshanda nemazvo kana zvikamu zvemota zvichishanda.
Maitiro Atinoita Iyi Foam Gasket
Izvo zvinhu zveiyi furo gasket ndeye irradiation kuyambuka-yakabatana polyethylene furo ine furo yekuwedzera huwandu hwegumi neshanu uye 65 kg / m³ yehuwandu. Saizi yegasket iri 130 mm x 98 mm x 1 mm ine tsika kufa kucheka.
1) yakavharwa cell polyethylene foam gasket zvinhuChokutanga tinoda kusimbisa nemutengi pane chigadzirwa CAD dhizaini. Chigadzirwa CAD vanodhirowa zvirinani kupihwa neinjiniya kubva kumutengi. Kune rimwe divi, kana mutengi asina CAD dhizaini rutsigiro, isu tinogona kuita icho chikamu cheinjiniya dhizaini yezvigadzirwa zvevatengi.
2) Mushure mekusimbisa iyo CAD kudhirowa kwekupupa furo, isu tichagadzira iyo simbi kufa kufa yekucheka muforoma zvinoenderana nemifananidzo yakasimbiswa. Kana iyo die yekucheka muforoma yagadzirira, vedu vashandi vefekitori vacharonga kugadzirwa kwakawanda.
3) Kana zviri zvekunyepedzera kweichi furo gasket zvinhu, tinofanirwa kuzadzisa iri pazasi yekugadzira maitiro:
Tsika furo kucheka
Iyo yekutanga polyethylene furo ndeimwe mhando yeakawedzera furo gasket zvinhu. Ivo vanouya vari mupumburu kwete mune jira, vashandi vedu vefekitori vanofanirwa kushandisa edu akamira ekucheka michina kuvacheka mumashiti. Aya akacheka polyethylene furo mapepa anofanirwa kunge akaenzana saizi yesimbi yekufa yekucheka muforoma kana yakakura.
Chinja die cutter uye gadza iyo yekufa yekucheka muforoma kuti igadzirise kucheka nemazvo
Pamberi pekugadzirwa chaiko, mainjiniya edu ekugadzira anofanirwa kunyatso chena yakavharwa sero polyethylene furo gasketsinstall iyo die cut cut uye kuigadzira zvakanaka zvinoenderana nemichina yekufa yekucheka. Maitiro aya ekuyedza muforoma kuda kunotora kurasikirwa kwenguva kupfuura mutengi anowanzofungidzirwa. Kana iri chaiyo yekucheka mhedzisiro, isu tinoshandisa chimwe chikamu chemafuro zvinhu kuti uve nechokwadi chekuti simbi muforoma yakanyatsoiswa. Mushure meizvi, kugadzirwa kwemazhinji kunogona kubvumidzwa kuenda.
4) Chikamu chekupedzisira chatinofanira kuita mutsika kurongedza kweakapedza furo zvigadzirwa zvisati zvaendeswa. Isu tinorongedza iyo tsika furo gasket yekufambisa zvirinani. Yakajairwa kurongedza senge yekudhinda pepa bhokisi uye poly mabhegi anowanikwa kubva kwatiri zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Kune iyi Polyethylene foam gaskets chirongwa pazasi chinodiwa